प्रचण्डबाट हेपिएका लेखराज भट्टले देखाइदिए ‘पावर’, केपी ओली मख्ख ! - Supportive Nepal
January 12, 2021 January 12, 2021 News NepalLeaveaComment on प्रचण्डबाट हेपिएका लेखराज भट्टले देखाइदिए ‘पावर’, केपी ओली मख्ख !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षले धनगढीमा आयोजना गरेको बृहत् आमसभामा कम्तीमा ७० हजार संख्यामा जनसहभागिता जुट्यो । साविक एमाले वा एकीकृत नेकपाकै कुनै कार्यक्रममा पनि यति संख्या पुग्न सकेको थिएन ।
सुुदूरपश्चिममा प्रभावशाली बनेका भट्टले आफ्नो राजनीतिक आयतन विस्तार गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रवार धनगढी उतारेका थिए र यहाँको व्यापक जनसहभागिताबाट त्यसलाई चरितार्थ गराएका छन् ।
माओवादी युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका भट्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वासपात्र मानिन्थे । पार्टी एकीकरणका बेला उनलाई कुनै पनि पद दिइएन । सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाइए साविक एमालेका नेता भीम रावल ।
रावललाई मन्त्री बनाउने दबाब पन्छाउँदै ओलीले भट्टलाई साथ लिएका थिए । रावल पार्टी इन्चार्ज भइसकेकाले उनैलाई दोब्बर पद दिनु न्यायसंगत नहुने ओलीको तर्क थियो । त्यसपछि २ नेताको राजनीतिक धार बदलियो । रावल ओलीका कट्टर विरोधी बने ।
भट्ट प्रचण्डको प्यानल त्यागेर ओलीनिकट भए । पछिल्लो पार्टी विभाजनका गतिविधिमा खुलेरै ओलीलाई साथ थिए । भट्ट हाल ओली पक्षका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुन् । नेता भट्टले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम विकासको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनले उत्तरमा चीनसँगको नाका र दक्षिणमा भारतसँगको सुख्खा बन्दरगाहले मात्रै सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खुल्ने योजना बनाएका थिए । ‘सुदूरपश्चिममा सुख्खा बन्दरगाह र भारतसँग अन्तदेशीय नाकाको विस्तार बाहेकको विकल्प थिएन ।
‘नेपालले महाकालीमा बनाएको ४ लेनको सडक र त्यस नजिकै नेपाल–भारतका एकीकृत भन्सार चौकीले पनि नेपालको विकासमा टेवा पुग्छ । अझ त्यसमा अन्तरदेशीय व्यापार र आर्थिक क्षेत्रको पनि तयारी भइरहेको छ,’ नेता भट्टले भनेका छन् ।
‘भीम रावलको नातावाद र कृपावादका कारण पार्टीमा असन्तुष्टि व्याप्त थियो । भट्टको आगमनसँगै ओली पक्षमा इमान्दार र योग्य नेता–कार्यकर्ता थपिएका छन्,’ एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘भट्टको राजनीतिक उचाइ पनि यसले बढाएको छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
सूर्य चिन्ह केपी ओलीले खोसे नेपालमा आँधीबेरी ल्याउछु : प्रचण्ड
तपाँई बिहानै खाली पेटमा चिया पिउँ;नुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ !
बाबुराम भट्टराईले “जातीय राज्य बनाए देशको कायापलट हुन्छ, नेपाल अमेरिका बन्छ” भनेपछि…
October 13, 2020 October 13, 2020 News Nepal
भारतका चर्चित क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीलाई सोच्दै नसोचेको ‘ध’ म्की आएपछि भयो यस्तो ।
October 10, 2020 October 10, 2020 News Nepal
यो बेला प्रचण्डलाई साथ दिनु भनेको देशप्रती गद्दारी गर्नु हो: दिननाथ शर्मा